Router ပြဿနာ — MYSTERY ZILLION
May 2011 edited May 2011 in Networking
အကိုတို့ ရေ ကျွန်တော့်မှာ internet ဆိုင်ကနေပြီးတော့ wi-fi connection ကို router ခံသုံးနေပါတယ်။ ကျွန်တော့် router က ပြဿနာတက်ပါလေရောဗျာ။ ကျွန်တော့် computer မှာ TP-Link ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့ router ရဲ့ network ပဲတွေ့တော့တယ် အကိုတို့ရေ။ internet cafe ကပေးထားတဲ့ network ကိုမတွေ့တော့ဘူး အကို။ တွေ့ရင်လည်း strength ကတော့ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ထဲ ကို ၀င်လို့တောင်မရတော့ဘူး။ router ပိတ်ပြီးသုံးရင်တော့ internet network ထဲ၀င်လို့တော့ရတယ် but strength မကောင်းတော့ သုံးလို့တော့ မရပါဘူး။ configure လုပ်ဖို့ကလဲ admin page ထဲကို၀င်လို့မရပါဘူး။ ဖြေရှင်းရနည်းလေးကို ပြောပေးကြပါဦးဗျာ။
ဘာ router ကို သုံးထားတာလည်း
router ထဲကို ကေဘယ်နဲ ဝင်တာလား wireless နဲလား
wireless ဆို ဘာ wireless mode အသုံးထားလည်း
တစ်ဆိတ်လောက်သေသေချာချာ လေးပြောပေးနိုင်မလားမသိဘူး၊အစ်ကိုကဘာလို. Router တစ်ဆင်.ခံသုံးနေရတာလဲ၊ Internet ဆိုင်ကပေးတဲ. Wi-Fi Connection ကအစ်ကို.ရဲ. Laptop/Desktop ထိရောက်တယ်မဟုတ်လား။အစ်ကိုကအိမ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ခွဲသုံးရမှာမို.လို.လဲ၊အများစုက Personal Use ဆိုပြီးတစ်လုံးဆီကိုပဲပေးသုံးကြတာလေ၊အစ်ကိုက Re-share ပြန်လုပ်လို.သူတို.ဆိုင်မှာ Connection ကျတဲ.အခါသူတို.ကအစ်ကိုယ်.ကိုပေးထားတဲ. Wi-Fi Connection ကိုခဏလောက် Disable လုပ်လိုက်လို.ရပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲ အကိုတို့ ရေ ကျွန်တော် အဆင်ပြေသွားပါပြီ :P